VPN: Inona izany ary ahoana no ahafahako misafidy ny tsara indrindra amin'ny filako? | Avy amin'ny Linux
VPN: Inona izany ary ahoana no ahafahako misafidy ny tsara indrindra amin'ny filako?
Mpampiasa Internet marobe amin'ny fotoana sasany, noho ny antony maro samihafa, no maniry matetika mivezivezy amin'ny haavon'ny «protección y privacidad», na avy any an-trano, na miasa na aiza na aiza. Matetika izy ireo no manao an'io ampiasao ny «VPNs», izay tsy inona fa ny «Redes Virtuales Privadas». Andian-teny izay amin'ny teny anglisy, dia voasoratra «Virtual Private Network» ary nohafohezina «VPN».
Ary ity, ny antony indrindra a «VPN» mamorona fifandraisana azo antoka ao anaty tambajotram-bahoaka, na fifandraisana izany «WiFi» amin'ny fitaovam-pitateram-bahoaka, trano toa trano fandraisam-bahiny, dobo filomanosana na trano fisakafoanana, na tambajotra manokana toy ny tranontsika na ny asanay. «Conexión segura» izay mamela ny fifamoivoizana angon-drakitra hivezivezy amin'ireo mpizara voafaritra tsara amin'ny alàlan'ny «cifrado» mitovy amin'izany, mba hanafenana ireo zavatra ataontsika amin'ny Internet, ankoatry ny fanolorana anay «protección» miatrika ireo loza ateraky ny tranonkala.
Aza adino izany «VPNs» Matetika izy ireo dia tena ilaina amin'ny lafiny maro. Izany hoe, tsy izany ihany tolotra «protección y privacidad», na ho antsika na ho an'ny fitaovantsika, fa afaka manampy antsika koa izy ireo mandresy ny azo atao «restricciones o censuras» avy amin'ny mpanome Internet na governemanta sasanyary manamora anay ny «acceso» na aiza na aiza mankany amin'ireo tranonkala Internet samihafa Mety ho voasakana ara-jeografika ireo mpanome azy ireo na ny lalàn'ny fireneny.
Ho fanampin'izany, ny mpamatsy sasany an'ny «VPNs» Voaorina tsara, mazàna izy ireo dia manana lisitra lava misy mpizara samihafa «anchos de bandas» misy izay afaka manolotra ambaratonga samihafa ny traikefan'ny mpampiasa arakaraka ny filàna takian'izy ireo. Antony mahatonga azy ireo matetika matetika any amin'ny toerana maro; manomboka amin'ny fikambanana lehibe sy tsy miankina amin'ny fanjakana ka hatrany amin'ny tranon'olona, ​​mba hahazoana fidirana lavitra sy azo antoka amin'ny tranokala na fotodrafitrasa tsy miankina.
1 Ahoana ny fomba hisafidianana ny VPN tsara indrindra amin'ny filako?
1.1 Aleo iray miankina amin'ny fahatokisana sy ny mangarahara
1.2 Aza variana amin'ny dokambarotra mamitaka
1.3 Fakafakao ny toerana misy anao na ny faritra misy anao
1.4 Aza mifidy iray izay mirakitra ny zavatra nataonao
Ahoana ny fomba hisafidianana ny VPN tsara indrindra amin'ny filako?
anefa tsy misy olona «VPN» tonga lafatra, nanomboka samy manana fetrany na ferana farafaharatsiny farafaharatsiny, izay mazàna lehibe kokoa na tsy dia lehibe ho an'ny olona samihafa, ny zava-dehibe dia ny fahafahany miantoka ny «protección y privacidad». Noho izany, ireo tolo-kevitra na singa hodinihina etsy ambany dia ho mpitari-dalana tsotra nefa ilaina raisina.
Aleo iray miankina amin'ny fahatokisana sy ny mangarahara
Omeo laharam-pahamehana hatrany ny serivisy an'ny «VPN» izay manome antoka anao ho azo itokisana ary tsy hanaiky lembenana amin'ny angon-drakitrao, na dia hampiasa ny serivisy ho an'ny olana tsotra fotsiny amin'ny geo -blocking na ny hafa aza ianao.
Aza variana amin'ny dokambarotra mamitaka
Aza mifidy ny «Proveedor de VPN» mifototra amin'ny fikarohana sy valiny tsotra azo amin'ny Internet, izay imbetsaka dia vokatry ny karazana marketing ihany «publicidad nativa» izay nalaina avy amin'ny «programas de afiliados» ary tombony ara-barotra, izay fanararaotana ary olana lehibe eo amin'ny sehatry ny mpamatsy VPN.
Fakafakao ny toerana misy anao na ny faritra misy anao
Tsarovy fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia tranga maro ny «programas de vigilancia masiva» avy amin'ny governemanta samihafa amin'ny firenena sasany manerantany, ary avy amin'ny orinasa lehibe manana ny fivezivezena manerantany ihany koa. Noho izany, aza mampiasa serivisy miorina any amin'ireo firenena voalaza ireo na iharan'ny governemanta voalaza na miankina amin'ireo fikambanana voarohirohy na tsia, hisorohana azy ireo tsy ho mora tohina «registros ilegales» ary fanekena ara-dalàna natao tamin'ny anaran'ny «seguridad nacional» na asa asa any ivelany.
Aza mifidy iray izay mirakitra ny zavatra nataonao
Misafidiana serivisy izay milaza manokana «que no mantienen registros», na raha tsy mahomby izany, inona ireo karazana firaketana tsy voatahiry. Serivisy maro avy amin'ny «VPNs» Milaza izy ireo fa tsy mitahiry firaketana, fa raha manao izany izy ireo, azafady mba hamafiso ho anao ny teny sy ny politika momba izany.
Farany, ary amin'ny fehiny, tadidio ao an-tsaina ireto teboka hafa ireto:
Fomba sy fepetra takiana amin'ny fandoavam-bola: Halaviro ireo mpamatsy izay mangataka angona fampahafantarana marobe momba izany.
Fototra efa niasa: Aleo ireo izay mampiasa protokol loharano malalaka sy malalaka, mba hahafahan'izy ireo manamarina sy manatsara azy ireo. Ireo mifanentana na miorina amin'ny OpenVPN no be mpitia indrindra, ary PPTP no kely indrindra mety amin'ny fiainana manokana.
DNS anao manokana sy IPV6: Misafidiana serivisy VPN mitazona ny mpizara IPV4 na IPV6 DNS azy manokana, ary manome adiresy IPv6 voafaritra VPN izay azo alaina amin'ny alàlan'ny tionelina VPN.
Encryption efa niasa: Misafidiana serivisy VPN misy encryption data sy tànana mahery. Hamarino tsara fa ny protokolola natolotra dia manana ny haavon'ny encryption marina.
Misafidy ny tsara indrindra VPN misy tranokala maro misy, fa Manoro hevitra ireto tranonkala 2 manaraka ireto izahay, ny iray amin'ny anglisy ary ny iray hafa español izay mampitaha fampitahana tsara amin'ny maro amin'ireo mpamatsy «VPNs» misy mifidy izay mifanentana amin'ny filantsika rehetra.
Ahoana no ahafahantsika mamintina mora foana, Las «VPNs» dia tena ilaina tokoa, satria anisan'ny zavatra maro afeno ny mombamomba anay «Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider - ISP)»; tavela fotsiny raha ny fahitana azy, fa efa nametraka fifandraisana amin'ny a Server «VPN», tsy misy zavatra hafa. Amin'izany fomba izany dia mivezivezy avy any amin'ny farany ka hatramin'ny farany ny angon-drakitra rehetra, mahazo «protección y privacidad».
Ary aza adino, ny fahazoana tombony azo rehefa mampiasa a «VPN» mivezivezy amin'ny alàlan'ny adiresy IP iray hafa noho ilay nomen'ny ISP anay, mba hitandrovana ny tena maha-olona antsika amin'ny Internet amin'ny toerana rehetra. Noho izany ny toerana alehantsika dia tsy mahafantatra fa ny fifamoivoizantsika dia avy amin'ny toerana tena misy antsika, fa izy io dia avy amin'ny Server «VPN».
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny VPN ianao, dia mamporisika anao izahay mandinika ny lohahevitry ny «Tunneling de las VPNs» ary ny «Protocolos VPN» ampiasaina ao anatin'ny teknolojia toy izany. Ary farany nefa tsy latsa-danja noho izany antony izany dia tsara foana ny mampiasa, toy ny mahazatra, amin'ny teknolojia malalaka na misokatra, dia ianao mamporisika anao izahay hampiasa «OpenVPN» arak'izay azo atao, satria ny teknolojia sy / na ny serivisy toy izany dia manome ny fandanjana tsara indrindra eo amin'ny hafainganam-pandeha sy ny filaminana.
Raha tianao ny famoahana dia lazao anay ny serivisy inona «VPN» mampiasa na manoro hevitra ianao ary maninona?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » VPN: Inona izany ary ahoana no ahafahako misafidy ny tsara indrindra amin'ny filako?
Inona ireo fonosana EPEL?
LibreOffice 6.2 dia vonona amin'ny fampiasana orinasa